Sea-front flat emangalisa ukubukwa kolwandle, ingadi yangasese - I-Airbnb
Sea-front flat emangalisa ukubukwa kolwandle, ingadi yangasese
Okusha ngo-2021 okungokwakho, isitayela se-studio esinefulethi elinamakamelo okulala angu-2 nokubukwa kolwandle okumangalisayo. Ukubheka ibhishi lokutshuza elithandwayo lase-Ogmore ngasolwandle nokufinyelela okuqondile ebhishi okulungele izinsuku ezinde zelanga nabangane nomndeni.
Ifulethi linethala lalo langasese elingemuva. Indawo yengadi yangaphambili inompheme ophakeme obheke olwandle onendawo enkulu yezinto zokutshuza/amabhayisikili.
Ngokuqondile emzileni we-Glam Heritage costal ungahamba ngqo ukuze ujabulele ukubuka ugu olumangalisayo olungakhiwe.
Ngendawo yokupaka yangasese, hamba engadini yakho yangaphambili futhi ukhuphukele endaweni ephakeme yangaphambili ukuze ujabulele ukubukwa okuhle kolwandle nokushona kwelanga. Indawo yengadi enhle ihlanganisa indawo yebhentshi yokusefa kanye negiya lokubhukuda ngokuvula nokuvala kalula.
Ngokungena kwakho kukhona isikhala esamukelekayo se-veranda enosofa othokomele ukuze ujabulele izinto ezibukwayo nemisindo yolwandle. Kunendawo yokugcina izicathulo, izingubo zokugqoka noma isihlalo sokusunduza njll. Igumbi lokugezela lesimanje linakho kokubili ishawa nebhavu ongaziphumuza kulo ngemva kokubhukuda noma uhambo olude olugudle ugu.
Igumbi eliphakathi libalele elinezikhala eziphakeme eziphezulu zenzelwe njengendawo yokulala, indawo yokuhlala noma yokudlela ukuze ihambisane nezidingo zakho. Inombhede osezingeni eliphezulu wokuthokomala, ikhabethe lezingubo elinendawo yokubeka kanye nezindawo zokushaja.
Igumbi elingemuva elinokuthula elivulekile lineminyango emibili yesikhala sakho sengadi yangasese enetafula nezihlalo. Igumbi lengadi lifaka ikhishi elifakwe i-high spec. Kukhona umbhede wabantu ababili onethezekile obheke engadini kanye netafula nezihlalo ukuze nijabulele ukudla ndawonye.
Isitolo esihle sasendaweni, izinhlanzi kanye ne-chip, izindawo zokudlela kanye nama-pubs aseduze. I-McArthur Designer Outlet inemizuzu eyi-10 nje emotweni ukuze ukwazi ukuthenga uze wehle nawe.
Ezinye izindawo ezikhangayo zihlanganisa: I-Merthyr Mawr Sand Dunes (indawo yesibili kwaphezulu eYurophu) kanye ne-Estate, i-Coastal Horse Riding e-Ogmore Farm, i-Southerndown Beach Surf Spot kanye ne-Dunraven Walled Gardens, i-Porthcawl ne-Rest Bay Top Surf Spot.